Ifulethi elithi "Rubio", Castro Caldelas - I-Airbnb
Ifulethi elithi "Rubio", Castro Caldelas
Castro Caldelas, Galicia, i-Spain
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Íria
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Mas 5.
E-Castro Caldelas, ifulethi elithi "Rubio" litholakala edolobheni elidala ledolobha lakudala. Isakhiwo esilungiswe ngokuphelele esinezinga elilodwa, esinokuhlobisa kwesimanjemanje kodwa ngaphandle kokulahlekelwa umnyombo wesikhathi esidlule: sigcina isakhiwo saso sasekuqaleni ngenkathi silondoloza izindonga zamatshe nophahla lwasemaphandleni.
Sigqame kakhulu futhi sinakho konke esikubheka njengento ebalulekile, ukushisa ne-air conditioning, ukuze sihlale kamnandi futhi sithokomale.
Ifulethi lilungele abantu abashadile, imindeni noma abahambi abahamba bodwa. Zombili zinekhishi elivulekele igumbi lokuphumula, ikamelo lokulala negumbi lokugezela.
Ikhishi linezitsha, isiqandisi, i-microwave, umshini wokuwasha izitsha, njll. Ekamelweni lokuphumula kunombhede owusofa, itafula elinezihlalo nomabonakude. Ikamelo lokulala linezinto zokulala, ikhabethe kanye ne-TV. Egunjini lokugezela kunomshini wokomisa izinwele, insipho, amathawula, njll.
Yindawo ethulile, ethokomele, esondelene futhi yangasese ku-villa ezungezwe yimvelo.
Sibheka kubalulekile ukusebenzisa imoto ukuze sifinyelele izindawo eziningi zokuvakasha zase-Ribeira Sacra, kokubili ezingokwemvelo nezesakhiwo. Nokho, akudingekile ukuyisebenzisa ukuhambahamba edolobhaneni lapho ungajabulela khona idolobhana lakudala elihambisana nezidingo zamanje. Okubalulekile ukugqamisa umzila wokuqwala izintaba oqala futhi ophela amamitha ambalwa ukusuka efulethini, phambi nje kwe-Loft ungangena ku- 'Ruta dos Muíños' lapho ungabona khona ubuhle behlathi lase-Montcian nganoma yisiphi isikhathi sonyaka.
1 umbhede wosofa, Umbhede wengane e-1
ubusuku obungu-7 e- Castro Caldelas
Mar 6, 2023 - Mar 13, 2023
Itholakala ezansi kwesigodlo esihle, itholakala enkabeni yomlando yesithakazelo esikhulu samasiko; izungezwe imvelo emangalisayo, impilo yasemaphandleni, izivini, imizana eyinkulungwane, amahlathi e-lush Impercian, izindawo eziyingqayizivele zemifula nezintaba. Iveza amathuba ahlukahlukene ohambo lokuvakashela izindawo eziningi zokuzilibazisa, amasiko, ukuzilibazisa, ukuphumula, noma imidlalo eminingi. Jabulela imizila eminingi yokuqwala izintaba ehlinzekwa yi-Ribeira Sacra: i-Ruta dos Muíños inesiqalo sayo amamitha ambalwa nje ukusuka ku-loft. Imizuzu embalwa ukusuka endaweni yokuhlala ungajabulela imifula ye-Sil River kusuka ezindaweni zayo ezinhle - eduze kakhulu ne-catamaran pier. Futhi iyindawo enhle kakhulu yokuvakashela amakhowa, ama-castros, ukujabulela izindawo eziphakanyisiwe zokudla okuconsisa amathe, (kubalulekile ukuzama umkhiqizo wenkanyezi we-Ribeira Sacra: i-Bica Amantecada), khumbula imibukiso yendabuko namaphathi noma uvakashele i-ski resort yase-Manzaneda. Inketho enhle ukuvakashela izivini zasekuqaleni kanye nezindawo zewayini ezinhle lapho unganambitha khona iwayini eliyingqayizivele kanye nomoya we-Ribeira Sacra: zithembele ezenzakalweni zomlando endaweni ethokozisayo yemvelo. Izinhlobonhlobo zamathuba azokuheha nakanjani.